Hanti aan cadadkeeda la cayimin oo ku baabaday dab ka kacay suuq kuyaala Nyamira – The Voice of Northeastern Kenya
Hanti aan cadadkeeda la cayimin oo ku baabaday dab ka kacay suuq kuyaala Nyamira
Hanti aan cadadkeeda la cayimiin ayaa waxa xalay ku baabaday suuq kuyaala countiga Nyamira waxana ay dhacdadan timid kadib marki u dab ka kacay ikonge oo ah goob ganacsi oo ku taalo countigaas Nyamira.
Ilaa iyo hadda ma cado sababta iyo sida uu u dhashay dabkaas baabiiyay hantida suuqaas ee lagu sheegay in ay ahayd malaayin shillin.
Sida u sheegay nin lagu magacaabo Gilbert Ndubi oo ah ganacsade ayaa waxa u dabka bilaawday xalay abaare 10-ka habeenimo waxana u si dhaqsa ah uu ugu fiday suuqa qeybihiisa kale.
Waxa u ganacsadaha sheegay in fursadaha dabkaas looga hortagi karay in u kusii faafin qeybaha kale ee suuqa ay yareed maadama u suuqa intiisa badan u ahaa mid lagu dhisay alwaax.
Ganacsatada ku hanti weysay dabkaas iyo wakiilka laga soo doortay wardka Ekerenyo Thaddeus Nyabaro ayaa waxa ay dawladda countigaas ka codsadeen in ay soo iibsato gawaarida gurmadka deg dega si looga hortago in ay mustaqbalka dhacaan musiibooyin noocan oo kale ah.
Taliyaha ciidamada booliska ee countiga Nyamira Kalimbo Mwandoe ayaa waxa u isna sheegay in ciidamo boolis ah ay aaga u dabka ka kacay ay geeyen si ay u la tacaalan dabka iyo in ay sidoo kalena ka hortagaan in la bililiqeysto hantida suuqa gubtay.
Biisha February ayay ahayd marki u gavanaha countigaas John Nyagarama u balan qaaday in u soo iibin doono laba gaari oo ah kuwa dab damiska ah.
← Madaxaweynihi hore ee dalka Mwai Kibaki oo hawlo caafimaad loogu dhoofiyay waddanka Koofur Africa
xoghayaha arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka oo dalka soo gaaray →